Ekipa mpandraharaha eo ambany fitarihan'ny mpitantana Jeneraly Colin haneho ny fihetsika kanto amin'ny Kanton Fair!
Izahay dia miresaka momba ny «Canton Fair» roa isan-taona ary mbola tsy teo mihitsy. Ity manaraka ity dia sarin'ny ekipanay matihanina miaraka amin'ny mpanjifa ao amin'ny fampirantiana ：
Tamin'ny fiandohan'ny taona 2020, dia niaina areti-mandringana manokana-COVID-19 izahay. Orinasa maro no nanakana ny famokarana nandritra ny roa volana. Taorian'ny fotoan-tsarotra dia nanohy ny famokarana mahazatra izahay. Na izany aza, nanjary nanjary matotra hatrany ity viriosy ity manerantany. Ny iray amin'ireo mpanjifanay etsy ...
ALLWIN – mpamatsy fitaovana lehibe
Nisy mpanjifa iray tany Brezila nanafatra vokatra fametahana kaontenera 1 × 20-inch roa volana lasa izay. Tamin'ny faran'ny volana jolay 2019 dia tonga tany amin'ny trano fivarotanay izy sy ny vadiny mba hizaha. Taorian'ny fizahana dia tena afa-po tamin'ny vokatray ALLWIN izy. Tena faly izahay momba an'io ary mino izahay fa ho làlana ...
Nahomby tamin'ny fitsapana 2.0 RoHS folo tsy metaly metaly ny PVC Mat
1. Topimaso momba ny fampiroboroboana ny indostrian'ny Stationery dia fitaovana isan-karazany ampiasain'ny olona amin'ny hetsika ara-kolontsaina toy ny fianarana, birao ary fiainana an-trano. Miaraka amin'ny fivoaran'ny toekarena sy ny teknolojia mitohy, ny sokajy fitaovam-pitaterana dia havaozina sy novolavola tsy tapaka ihany koa. Modern st ...
Ahoana ny fomba hisafidianana kidoro fanapahana tsara amin'ny fahazoana ny fampiasana sy ny mampiavaka ny famonoana?
1. Ny tanjona sy ny mampiavaka ny tsihy fanapahana? Ny pad fanapahana dia iray amin'ireo fitaovana izay tsy maintsy ampitaovin'ny mpilalao maodely taratasy. Ny fantsom-pandrefesana dia iray amin'ireo fitaovana izay tsy maintsy ampitaovin'ireo mpilalao modely amin'ny taratasy: a. Ny fandriana fanapahana dia hiaro ny volo ary hanitatra ny androm-piainan'ny lelany; b. Ny cutti ...
Amin'ny fampiroboroboana fantsona sy fananganana marika an'ny indostrian'ny Stationery any Shina
Ny fifandraisana misy eo amin'ny mpanamboatra sy ny mpivarotra dia mijanona ao anaty fifandraisana tsotra amin'ny fifanakalozana, ary ny roa tonta dia tsy manana fiaraha-miasa stratejika sy avo lenta ary fifandraisana. Vokatr'izany, ny loharanom-bolan'ny roa tonta dia tsy mifandray ary ny tanjon'ny marika iraisana eo amin'ny tsena dia tsy afaka ...
128th Canton Fair 10.15 ~ 10.24 Tongasoa eto hitsidika ny trano heva misy anay: 1.2M15-16 milahatra
Ry mpanjifa malala, noho ny fiatraikan'ny valanaretina pnemonia satro-boninahitra vaovao manerantany tamin'ity taona ity, ny Canton Fair tamin'ity taona ity dia notanterahina tamin'ny Internet na tamin'ny Internet. Natomboka ny foara 128 Canton, ary ny 15 oktobra ka hatramin'ny 24 oktobra ny fotoana fihazonana. Manasa anao manokana izao hijery ny o ...